Rastra Daily | नागरिक एप सुरु, के के पाउन सकिन्छ सेवा ?
नागरिक एप सुरु, के के पाउन सकिन्छ सेवा ?
अब सरकारी सेवा सुविधा लिँदा कागजात बुझाउनुपर्ने झण्झट अन्त्य हुने भएको छ ।
सरकारले शुक्रबारदेखि नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सरकारले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सेवालाई डिजिटलाइज्ड गरी एकीकृत प्लेटफर्म मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हात हातमा सरकारी सेवा’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएका हो ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको परिकल्पना सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरु सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने नीति अनुरुप सरकारी काम काजको अनुगमन, सुनुवाइ, तथा सम्बोधन गर्ने उदेश्य अनुसार एप सार्वजनिक गरिएको हो ।
नागरिकले आफ्नो नागरिकता, राहदानी, कम्पनी दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता कागजात साथमा बोकर हिडिरहनुपर्ने झण्झट अब नहुने बताइएको छ ।
एपले स्वचालित रुपमा आवश्यक विवरण लिने तथा पुष्टि गर्ने काम गर्दछ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा एपको शुभारम्भ गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सञ्चार तथा सूचनाको उच्चतम प्रयोग गर्दै नागरिकलाई हात हातमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने एप सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।
शुक्रबार नागरिक एपको सार्वजनिक परीक्षणको रुपमा दुई वटा भर्सन शुभारम्भ गरिएको बताए ।
मन्त्री गुरुङले सो सेवा आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा करिब ३ वर्षअघि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट पारित भएको थियो ।
‘कम खर्चमा नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवालाई डिजिटलाइज्ड गरी एकीकृत प्लेटफर्म मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य बमोजिम एप निर्माण गरिएको हो,’ उनले भने ।
मन्त्रालय सचिव हरिप्रसाद बस्यालले मोवाइल एप मार्फत सवारी कर, लाइसेन्स, नवीरकण, लोकसेवा लगायतका सेवा प्राप्त गर्न सकिने बताए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत सरकारको स्मार्ट नागरिक बनाउने उद्देश्य अनुसार एप शुरुवात गरिएको उनले बताए ।
नागरिक एपमा विभिन्न सरकारी कार्यालहरुसँग भएको विवरणहरुको प्रयोग गरी नागरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको छ ।
यो एपमा आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि जोडिनेछ ।
एपमा नागरिकता नम्बर राखेकै भरमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्राप्त गर्ने प्रकृया थाल्न सकिन्छ ।
यो एप प्रयोग गर्न पनि एकदमै सजिलो छ । आफ्नो नाममा रहेको मोबाइल नम्बरबाट यो एप र यसमा रहेको सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि कसको नाममा दर्ता रहेको छ भने एपले स्वचालित रुपमा पत्ता लगाउँछ ।
नागरिकता नम्बरबाट नै एपले सम्बन्धित निकायको सिस्टममा पहुँच बनाउन सक्छ ।
संघदेखि स्थानीय सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सबै सेवा सुविधा क्रमश यो एपबाट प्रदान गरिने छ ।
स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने ६४ मध्ये ४० भन्दा बढी सेवा यो एपमा उपलब्ध हुनेछन् ।
यसमा कुनैपनि विवरण भर्ने वा अपलोड गरिरहनु पनि पर्दैन । क्लक गरेकै भरमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका लागि आफैँ आवेदन भरिन्छ ।
एपमा पहिलो चरणमा सरकारी सेवा र दोस्रो चरणमा अर्ध सरकारी सेवा समेटिनेछन् ।
यसले नागरिकको सहजता सुशासन, भष्ट्राचार न्यूनीकरण र सरकारको सञ्चालक खर्च कटौतीमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने देखिएको छ ।
एपले पारदर्शिता बढाउन, झण्झटमा मुक्त गर्दै सरकारी सेवा तथा सूचनाहरु नागरिकको हात हातमा रहेको मोबाइलबाटै कसरी दिन र सरकारी कागजपत्रहरुलाई मोबाइलमा नै सुरक्षित राख्न एप सहयोगी छ ।
सार्वजनिक विदाको दिन सहित २४ सै घण्टा सरकारी सेवा प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकको सेवालाई सरल र व्यवस्थित गर्न एपको सुरुवात गरिएको हो ।